Akhriso: Danaha dowladaha Itoobiya iyo Kenya ay ka leeyihiin Jubbaland – Bandhiga
Akhriso: Danaha dowladaha Itoobiya iyo Kenya ay ka leeyihiin Jubbaland
Waxaa soo shaac baxday faragelinta doorasho ee lagu hayo Jubbland xili Jubbaland isku diyaarinaya doorashada madaxtinimo maalmaha soo socda.
Waxaa jira loolan siyaasadeed oo dowladaha Kenya iyo Itoobiya ay ka dhexwadaan doorashada madaxtinimo ee Jubbaland iyadoo dowladda Federalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha Gudaha amaradeeda doorashada ay noqdeen kuwa ah hal bacaad lagu lisay.
Dowladda Kenya inkabadan 7 sano waxey saaxiib dhaw la tahay madaxwenaha talada Jubbaland haya ee Axmad Madoobe oo haddana ah musharax madaxtinimo.
Kenya waxey aragtaa fursado badan oo Soomaaliya ay ka heli karto iyadoo Jubbaland u soo mareysa maadama deris dhanka xuduuda ay ka yihiin.
Taageero gaar ah ayey siisay Axamd Madoobe intii uu xafiiska hayay, sidoo kale ciidamada Kenya ayaa la geeyay deegaano dhaca Jubbaland oo Kismaayo kamid tahay iyagoo ogolaansho sax ah aan ka heysan howlgalka AMISOM iyo dowladii Federalka balse kaliya waxey ka soo martay Soomaaliya hogaamiyaha Jubbbaland Axmad Madoobe.
Kenya waxey dekadda Kismaayo ka dhoofsataa Dhuxusha sidoo kale Sonkorta ayaa isku dhaafta Kismaayo iyo Kenya oo dhaqaale badan ay ka sameeyaan ganacsatada Kenya ee u dhaw Uhuru Kenyatta.
Kenya ayaa u aragta Jubbaland maamul muhiimad gaar ah u leh maadama xadgubuubka ay ku sameesay Biyaha dalka uusan ka hadlin Karin taliska hadda Jubbaland gacanta ku haya oo ay dooneyso inuu soo laabto markale.
Dowladda Itoobiya oo kaashaneysa dowladda dhexe ee Soomaaliya waxey isku dayday dhowr mar iney la heshiiiso Axmad Madoobe oo Kenya saaxiib la’ah iyadoo ka soo mareysa madaxda Federalka dalka.
Axmad Madoobe oo aaminsan in Itoobiya siyaasadeeda xuntahay ayaa iska diiday casuumaad loogu fidiyay Addis Ababa si ay u heshiiyaan.
Sidoo kale Itoobiya aya ku guul dareesatay ciidamadeeda ku socda howlgalka AMISOM iney la wareegaan garoonka magaalada Kismaayo iyadoo ujeedka yahay in doorashada faragelin weyn ay ku sameyso dowladda Federalka.
Waxaa kaloo dowladda Itoobiya ay damacday iney xaliso khilaafka kala dhaxeeya dowladda Federalka maamulka Jubbaland balse kuma guuleysan.
Waxey Itooiya u soo dirtay Soomaaliya saraakiil sirdoon ah iyo khubaro si waxbadan looga badalo maamulka Axmad Madoobe.
Danaha ugu waa weyn ee Itoobiya ka leedahay Kismaayo ayaa ah isticmalka dekadda Kismaayo oo dowladda Federalka ay u ballan qaaday in lagu wareejin doono, balse Axmad Madoobe ayaa loo arkaa inuu caqabad weyn ku yahay danaha dowladda Federalka iyo waliba tan Itoobiya.
Dowladd Dhexe ayaa dhankeeda dooneysa in Axmad Madoobe kursiga laga tuuro maadama mucaarad uu ku yahay si ay u geesato musharax gaar ah oo ay wadato dowladda Soomaaliya kaa oo ah wasiirka dekadaha Maxamed Cabdullahi Oomar oo wali aan iscasilin kuna sugan Muqdisho.
Waxaa xusid mudan in dowladaha Kenya iyo Itoobiya ay cadow ku yihiin Soomaaliya kaliya ay ka shaqeynayaan danahooda.
U Gaar Ah Bandhiga.net